Njengoko izithintelo zokuhamba e-US zulula, uhambo olusuka e-UK luya kunyuka nge-10 yezigidi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Njengoko izithintelo zokuhamba e-US zulula, uhambo olusuka e-UK luya kunyuka nge-10 yezigidi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Kwivoti yakutshanje, iipesenti ezingama-58 zabaphenduli behlabathi baveze ukuba iimfuno zokubekwa bodwa zezona zithintelo zohambo lwamazwe aphesheya, enye i-55% isithi iyakuthintelwa zizithintelo zohambo.
Ndwendwela abahlobo kunye nezihlobo (VFR) zabahambi ezinokubakhokelela kwimfuno kwinqanaba lokufumana kwakhona ngokukhawuleza.
Uhambo lwe-VFR lubekelwe ukwanda kwinqanaba lokukhula lonyaka (CAGR) lama-24.8% phakathi ko-2021 no-2024.
Iinqwelomoya zase-UK-US zimiselwe ukuxhasa ukubuyela kokuhamba phakathi kwamazwe amabini njengoko kunyuka iimfuno zeenqwelomoya.
Isibhengezo sokuba izithintelo zokuhamba e-US zabahlali abagonyelweyo e-UK ziya kukhululeka ukusukela ekuqaleni kuka-Novemba ziya kudibana ngokuqinisekileyo ngabantu abafuna ukudibana nosapho kunye nabahlobo. Inani labantu abaphuma e-UK bayokundwendwela abahlobo kunye nezihlobo (i-VFR) kulindeleke ukuba lenyuke ukusuka kwizigidi ezili-10.6 ngo-2021 ukuya kwizigidi ezingama-20.5 ngo-2024 - yinto entle leyo eyi-24.8% CAGR. Ezi ziindaba ezimnandi kuphela kukhenketho lwase-US, oluya kuthi luxhamle kukuthontelana kwabakhenkethi base-UK.
Ukuhamba kwe-VFR kunokwenzeka ukuba kukhokelele ibango kwikamva elingekude njengoko izithintelo zokuhamba ziqala ukudambisa kunye nokufuna ukuvulwa kungavulwanga. Ngapha koko, i-VFR kulindeleke ukuba inyuke ngesantya esiphezulu kunokuzonwabisa, okungaqhelekanga njengoko ukuzonwabisa kwangaphambili kwe-COVID kwakuphezulu kakhulu kwimfuno kune-VFR. Ukugxila kwimfuno yokuhamba yeVFR iya kuba sisenzo esifanelekileyo kubo bobabini UK kwaye US Iinqwelo-moya, njengokuba abahambi base-UK bajonge ukunxibelelana nabo babathandayo emva kweenyanga zokwahlukana.
Ukuthandabuza ukuhamba kungatshintsha kunye nokunciphisa izithintelo zokuhamba kunye neemfuno zokuvalelwa. Ukususela ekuqaleni kukaNovemba, ugonywe ngokupheleleyo UK abahambi baya kuba nakho ukugqithisa iimfuno zokuvalelwa bodwa kwaye bajongane nezithintelo zokuhamba ezimbalwa xa bengena e-US. Kuya kuthi, nangona kunjalo, kusafuneka banike ubungqina besiphumo sovavanyo esingalunganga kungekho ngaphezulu kweentsuku ezintathu ngaphambi kohambo okanye ubungqina bokuchacha kwi-COVID-19 kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
Olu phumlo lubonakala kakuhle kwabo bazimisele ukuya phesheya. Inkqubo ye- US kudala indawo ethandwayo kubakhenkethi base-UK kunye nohlalutyo loshishino lubonisa ukuba US yayiyindawo yesihlanu ethandwa kakhulu kwilizwe jikelele ngo-2019. Ngokunciphisa izithintelo kulindeleke ukuba ikhulule imfuno yokungena kunye nokubonelela ngeniso efunekayo kwiinkampani zokuhamba.
Iinqwelomoya ezihamba ngqo zinokudlala indima ekuveliseni ingeniso efuneka kakhulu kunye nokunyuka kwexesha lokuhamba ngenqwelomoya.
UKIinqwelo-moya ezisekelwe ezinamandla US Iishedyuli zokuhamba ngenqwelomoya, kubandakanya iBritish Aerways kunye neVirgin Atlantic, baxele ukunyuka kwemfuno yenqwelomoya e-US. Iinqwelomoya ezithe ngqo ziya kuthandwa ngabahambi njengoko bevumela amava akhuselekileyo kunokuba benxibelelana ngehabhu.